Ukuseka Isebe kwi-Germany - Abaqondisi-mthetho kwi-Brazil Niger! Zonke abaqondisi-mthetho ingaba i-intanethi.
Abaqondisi-mthetho kwi-Brazil Niger! Zonke abaqondisi-mthetho ingaba i-intanethi.
Ukuseka Isebe kwi-Germany
ayikho leqela le nkqubo kwaye loo iqumrhu unako izaliswa kwi nje iintsuku ezimbalwa Ulungile ukwazi ukuba invested imali iza kuphela ukususela umzali inkampani Impahla yexabiso bamele kanjalo ezibonelelwe ngu - umzali inkampani kwaye, ukuba i-igunya icela isebe ukuba ikho uluhlu kunye yayo impahla yexabiso, zonke iimpahla langaphandle inkampani kuya kufuneka ukuba ibe oku kubandakanyaEyona nto izigqibo i-sebe, ingakumbi enxulumene kokufumana yexabiso kunye izahlulo, kufuneka bafumane isiqinisekiso ukususela overseas inkampani. I-sebe kufuneka abhalise langaphandle yenkampani ungqinelwano ikhasi kwaye zonyaka ka-ilahleko kwaye profits rhoqo ngonyaka ngexesha isiphuthukezi Abarhwebayo Registry.
Mali iingxelo besebe kugcinwa khona ngokwahlukeneyo kwaye kufuneka deposited kwi iminyaka qho.
Ukuba lokuzalwa sele esayiniweyo kwi, inzala, izinto ezichaphazela, kwaye royalties okanye refunding ye-corporate irhafu. Kuba oku, eli sebe esekwe kwi-Germany kufuneka azise ubungqina ukuba abo iirhafu ingaba sele ihlawulwe kwi-kwilizwe langaphandle. Nazi ezimbalwa iinyaniso ukuqwalaselwa xa sele efanayo unyango njengoko kuyo inkampani ngoko ke ubhaliso kwi-Abarhwebayo Registry ngu compulsory, kunye ethile, amaxwebhu, ezahlukileyo ukususela okkt linikelwe yesizwe iinkampani. Uluhlu kunye namalungu ulawulo ibhodi kwaye supervisory ibhodi kufuneka zaziswe e ubhaliso, ukuba ikhona. Bonke ngasentla kufuneka zibhalwe ngendlela isiphuthukezi okanye ekhatshwe a isiphuthukezi esemthethweni lwimi. Ubhaliso e Abarhwebayo Registry iza kunye issuance le isiqinisekiso sokubhalisa, irhafu inani, i-VAT kwaye izitatistiki inani. Ezinye iimfuno ukuba isebe kufuneka ekuzalisekiseni phambi kokuqalisa ukusebenza a ngu ukuba ubhalise kwi-arhente Yokhuseleko Lwezentlalo Jonga Embindini, Basebenze Inspectorate, kwaye e a private kuphela kuba workmen ke, kunokwenzeka ingozi imbuyekezo yabasebenzi i-inshorensi. ingaba i-elula kuthelekiswa a subsidiary, okuthetha ukuba kukho abangaphantsi iimfuno, apho Amanqaku of Association kunye nokumiselwa ka sebe ubhaliso ingaba ezigunyazisiweyo.
Kwimeko a subsidiary, incorporation babe ngathi ayixhasi namnye complex ngenxa yokuba investor kufuneka iqwalasele zonke incorporation nemigaqo-nkqubo we inkampani, ukusuka ekuqaleni.
I see akhawunti kwaye mali lokwenza ingxelo kuba zahlukile ukususela okkt kuba subsidiaries, yokugqibela, okkt ekubeni ukungenisa iingxelo-mali iingxelo.
Njengoko kuba taxation ka amasebe, aba ngabo ngokulawulwa corporate werhafu yengeniso ka-amabini-omnye njengoko kuba na uhlobo kukuba akukho mfuneko ubuncinane share eyinkunzi ukuba idiphozithi kwi isiphuthukezi bank i-akhawunti, ngolohlobo kwimeko subsidiaries, nangona kunjalo, nibe atyumbe enye zethu abameli, kunye namandla lamagqwetha, umthetho egameni lakho langaphandle inkampani kweli lizwe. Thina remind ukuba zethu abacebisi zi ku yakho yenkonzo ukuba ungathanda kumisa isebe kwaye kufuneka isemthethweni ummeli. Masibe kukuxelela vetshe malunga nalo mba Ewe, onke amashishini karhulumente, kuquka amasebe, kufuneka ubhalise kuba irhafu ngeenjongo yenza kunye taxation imicimbi kweli lizwe. Omnye iimfuno ukuqwalasela corporate income tax kwaye Isiqinisekiso Okulungileyo Emi ye-langaphandle inkampani, Memocomment kwaye Amanqaku of Association, ikopi Isiqinisekiso Kubhaliswe umzali inkampani, umzuzu Jikelele Intlanganiso ibhodi lwabalawuli ingaba ezimbalwa kuyimfuneko amaxwebhu ukuba ungathanda ukucwangcisa imisebenzi njengoko i-sebe. Phambi kokuba oko, kuya kufuneka ubhalise kuba irhafu ngeenjongo, ingakumbi i-VAT kunye namaqonga imirhumo. Thina remind ukuba abe efanelekileyo isisombululo kuba inkulu iinkampani ukusuka ngaphesheya oko bekuya, okokuqala, khangela phezulu ngomhla wentengiso kwaye uzole kuba elinolwazi ishishini umfanekiso nge notable ishishini kwaye kwi-ofisi Niger ke engundoqo izixeko. Kufuneka bazi ukuba onesiphumo-ofisi impahla kuza nge onesiphumo umncedisi, i-imeyili ukuqokelela kwaye usiya phambili, ifowuni kwaye ifeksi iinkonzo, bank uqokelelo zonyaka kunye ezininzi. okanye ngaso nasiphi na inkampani kweli lizwe, okuthetha ukuba inkampani unako ukwenza imisebenzi kwi engaqinisekanga ixesha kwaye akukho izithintelo kolu luvo, kwaye awuhlonele Basebenza Umthetho kwaye Imisebenzi Umthetho kwi-Germany. Ukuba ukhetha hire abaqeshi ezivela kwamanye amazwe, kufuneka baqwalasele umsebenzi mvume imithetho kuba expats kwi-umxhasi, uza beneficiate ukususela edibeneyo expertize ka-wobulali abaqondisi-mthetho ngamazwe abacebisi.
Luiz Felipe Scolari ajongene, ulwaphulo-mthetho uphando phezu tax evasion kwi-Germany
Portuqaliya Cinayət Hüququ Prosedurları - Bayraqları, Xəritələr, İqtisadiyyatı, Tarixi, İqlimi, Təbii Sərvətləri, Cari Məsələlər, Beynəlxalq Sazişlər, Əhalisi, Sosial Statistika, Siyasi Sistem
© 2021 Abaqondisi-mthetho kwi-Brazil Niger! Zonke abaqondisi-mthetho ingaba i-intanethi.